सक्छौ दियो जलाऊ, कसैको मन नजलाऊ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०७२, सोमबार March 21, 2016
पाएर दुःखी हुनुभन्दा ,गुमाएर सुखी हुनु जाति
“मुर्खलाइ गल्तिको भान हुँदैन,,
दुखि मनले दिएको दान हुँदैन,….”
मानिस गरिब भएर होईन हरिप भएर दु:खि हुन्छ ।जलाउन सक्छौ भने दियो जलाऊ, कसैको मन नजलाऊ ।बेईमान्,धोखेवाज्, चोर्, धुर्त्,चरित्रहिन्,,चाण्डाल्, लोभि, लालचि,ज्ञानी, अज्ञानि,सवै केवल मन नै हो ।जसले मनलाई बूझ्यो , उसले संसार लाई बूझ्यो जस ले बुझेन उसले अाफुलाई नि बुझ्न सक्दैन। मनलाई आफ्नो बनाउन मनकै मित्र बन्ने प्रयास गरौं । मननै दु:खको कारण भएकाले श्रीमद्भभागवत गीतामा भनिएको छ : ‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्द मोक्ष यो “।
हर गल्ती र प्रगती मनबाटै हुन्छ । तर गल्ती नै सर्वस्व होइन अपितु गल्ती त्यसले मात्रै गर्छ, जसले नयाँ सिर्जनाका लागि आफैंलाई परीक्षणको भट्टीमा हाल्न तयार हुन्छ। त्यसैले तपाईंहरूले पनि आजैका दिनदेखि गल्ती गर्न सुरु गर्नुस्। जब गल्ती गरेको थाहा हुन्छ, त्यसलाई सच्याउनुस्। गल्ती जीवनको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा हो। गल्ती प्रगतिको सूचक हो। गल्ती गर्नु कुनै गल्ती होइन। तर गल्ती देखि पाठ नसिक्नु गल्ती हाे । जिन्दगी परिवर्तन हुन वर्षौं लाग्ला तर सोच एक मिनेटमै परिवर्तन हुन सक्छ । तसर्थ सोच परिवर्तनका लगि अरू कोहि होइन तपाईं स्वयं जिम्वेवार बन्न सक्नु हुन्छ । र्सवदा सत्यमार्गमा हिडने व्यक्तिको बाहृय र भित्री दुवै उन्नतीको द्धार खुल्दछ ।
त्यो मानिस मृत्‍युको डरले आत्तियो र यमराजलाई भन्यो “के म यमराज संग बसेर १ कप चिया पिउन सक्छु ? यमराज ले भने : अबश्य !! मानिसले चियामा निद्राको ट्याबलेट मिलाएर यमराजलाई दियो !! यमराजले चिया पिएर गहिरो निद्रामा मस्त सुते, तेही मौका छोपेर त्यो मानिसले आफ्नो नाम मेटेर सूचिको अन्तिममा लगेर राख्यो ! । जब यमराजको निद्रा खुल्यो, मस्त निद्रा र चिया ले प्रफुल्ल भएर यमराजले भने ” तिमिले मलाइ चिया पिलाएर धेरै खुसि गर्यौ यो सुचि म अब अन्तिमबाट शुरु गर्छु ” कथाको सन्देश – भाग्यको खेल बदल्न तेती सजिलो छैन !! सकारात्मक शब्द यति शक्तिशाली हुन्छ कि दु:खाइको बखत कडा ‘दु:खाई नाशक “अौषधी जस्तै। सँसारमा सबै औषधी त किन्न पाईन्छ तर मनको दु:ख मेट्ने औषधी कुनै शहरमा पनि भेटिन्न। यहि औषधी नभेटेर अस्ट्रेलियाको एक धनी व्यक्ति जसको आफ्नै नीजि विमान थियो , उनले केही समय अघि आत्महत्य गरे आफ्नै अलिशान महलमा । महलले दु:खको मलम दिंदैन तर झुपडी र खुला आकाशको वास नै किन नहोस् उ सँग संसारलाई हेर्ने र बुझ्ने सकारात्मक दृष्‍टि छ भने हर दिन उसका लागि प्रकृतिको उपहार बन्छन्। मानिस उपलब्धीमा मातिन्न्छ र त्यसैले दु:ख तर्फ डोर्याउंछ । त्यसैले पाएर दुखि हुनु भन्दा जीवनलाई बुझ्दै गुमाउंदा पनि सुखि र आनन्दीत हुन सक्नु नै मिठो जीवन हो । यदि तपांई पनि कतै दुख्नु भएको छ भने यी १० आनन्दका र सन्तुस्टिका सकारात्मक क्याप्सुल लिनुहोस्।
२- दु:ख भन्ने चिज सबैलाई पर्छ, तर जो दु:खमा पनि मन सम्हालेर खुसि हुन खोज्छ/सक्छ त्यो जिन्दगिमा कहिलै दु:खि हुनु पर्दैन ।
१०-जे हुनु छ हुन्छ नै ।